Ny tanjona tamin’ity fihaonana tetsy Anosy ity ny fiantohana ny fandriampahalemana, hahafahan’ny vahoaka misitraka ao anatin’ny fitoniana ny zo hifidy.
Nilaza ny Praiminisitra fa hahetsika avokoa ny mpitandro ny filaminana eran’i Madagasikara, mialoha, mandritra ary aorian’ny fifidianana, ary hatao ho ampy ny isan’izy ireo.
Fanapahan-kevitra telo lehibe momba io fifidianana io no noraisina mifandraika amin’izany, ka ny voalohany dia ny fanatevenana ny isan’ny mpitandro ny filaminana, na aty an-drenivohitra izany na any ambanivohitra.
Ny faharoa dia ny fanamafisana ny fiarovana ireo toerana miantoka ny fanatanterahana ny fifidianana, izy ahiahiana hiharan’ny ankasomparana. Nanambaran'ny Praiminisitra fa tokony hanaraka ny didy aman-dalàna ny tsirairay, indrindra eo amin’ny fanaovana fampielezan-kevitra. Efa madiva hifarana izany fotoana izany, hoy ny Praiminisitra, ka ilaina ny fametrahana lamina eo amin’ny fitandroana ny filaminana.
Ny fahatelo dia ny fanamafisana ny fanentanana ny vahoaka Malagasy mpifidy mba hijery mialoha ny toerana izay handatsahany vato.
Nanao antso avo tamin’ny vahoaka Malagasy ny Praiminisitra, mba tena hiatrika ny fifidianana sy hifidy an-kahalalahana satria iaraha-mahalala hoy izy fa fifidianana akaikin’ny vahoaka ny fifidianana Ben’ny tanàna.